ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာသိကောင်းစရာ – အပါရှာ – Digital Photography Myanmar
HomeBasic Photographyဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာသိကောင်းစရာ – အပါရှာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာသိကောင်းစရာ – အပါရှာ
July 11, 2016 Zaw Basic Photography 2
Tempest by Sheldon Evans on 500px
အော်တိုမုဒ်ကိုပဲသုံးနေရာမှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် exposure triangle လို့ခေါ်တဲ့ အိုင်ဆို၊ အပါရှာ၊ ရှပ်တာစပီး တို့ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့တော့ အပါရှာအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။
အလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အပါရှာဆိုတာ မှန်ပြောင်းမှာပါတဲ့ အပေါက်တစ်ပေါက်ပါ။ ဒီအပေါက်ကျယ်ရင် အလင်းပိုဝင်ပြီး သေးရင်အလင်းအနည်းငယ်သာဝင်ပါတယ်။
အပါရှာကို f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/22 ဆိုတဲ့ f-stops နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။
အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း f/1.4 ရှိတဲ့ အပါရှာဟာ f/2 ရှိတဲ့အပါရှာ တစ်ဆပိုကျယ်တဲ့အတွက် အလင်းတစ်ဆပိုဝင်ပါတယ်။ ထို့အတူ f/2.8 ရှိတဲ့ အပါရှာဟာ f/2 ရှိတဲ့ အပါရှာထက် တဝက်သေးငယ်တဲ့အတွက် အလင်းတဝက်ပဲဝင်စေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ f-stop တစ်ခုကနေ နောက် f-stop တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းက ဝင်လာတဲ့အလင်းကို တစ်ဆတိုး သို့မဟုတ်လျှော့နည်းစေပါတယ်။ ရှပ်တာစပီးကို stop တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းကလည်း အလင်းကို တစ်ဆတိုး သို့မဟုတ်လျှော့နည်းစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက f-stop ကို one stop တိုးပြီး ရှပ်တာစပီးကို one stop လျှော့လိုက်ခြင်းဖြင့် ကင်မရာထဲကိုဝင်လာတဲ့ အလင်းပမာဏကို ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံလူသစ်တွေကို ရှုပ်ထွေးစေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ကျယ်တဲ့အပါရှာမှာ သေးတဲ့ f-stop နံပတ်ရှိနေပြီး သေးတဲ့အပါရှာမှာ ကြီးတဲ့ f-stop နံပတ်ရှိနေခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် f/2.8 ဟာ f/22 ထက်လွန်စွာကျယ်ပါတယ်။
Japanese Tranquility by Natasha Pnini on 500px
Depth of Field ခေါ်ဖိုကပ်ပြတ်နယ်နိမိတ် နှင့် အပါရှာတို့ဆက်စပ်ပုံ
အပါရှာကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် ပုံမှာသက်ရောက်သွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ် အသိသာဆုံးကတော့ Depth of Field ပါ။
Depth of Field (DOF) ဆိုတာ ပုံတစ်ပုံရဲ့ focus ပြတ်တဲ့အတိုင်းအတာပါ။ depth of field များရင် ပုံထဲရှိ ကင်မရာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအရာများကနေ ဟိုးအဝေးဆုံးရှိအရာများထိ နေရာတော်တော်များများဟာ ဖိုကပ်ပြတ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ဥပမာအားဖြင့် အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ရှုခင်းပုံကို အပါရှာ f/16 နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်လို့ ဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့တောင်တွေနဲ့ အနီးမှာရှိတဲ့ လှေတွေထိ ဖိုကပ်ပြတ်ပါတယ်။
depth of field နဲရင် အပေါ်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ ပေါ့ထရိတ်ပုံကဲ့သို့ ပုံရဲ့အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေလောက်ပဲ ဖိုကပ်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာ ဖိုကပ်မပြတ်ပဲ ဝါးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွင် မျက်လုံးများသာ ဖိုကပ်ပြတ်ပြီး နောက်ခံဝါးနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးရဲ့အနောက်နားတွင်ရှိသော ဆံပင်သည်လည်းဝါးနေပါတယ်။ ဒီပုံကို အပါရှာ f/1.8 နဲ့ရိုက်ထားပြီး depth of field အလွန်နဲပါတယ်။
အောက်ပါပုံသည်လည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ အပါရှာ f/1.8 နဲ့ရိုက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် depth of field အလွန်သေးပါတယ်။ ultrasound ပုံသာ ဖိုကပ်မိပြီးကျန်သောနေရာအားလုံးဝါးနေပါတယ်။
Baby Bokeh by Henington on 500px
အောက်ပါပုံကိုတော့ f/1.2 နဲ့ရိုက်ထားပြီး ဂစ်တာသာလျှင်ဖိုကပ်ပြတ်ကာ ကျန်သောအရာအားလုံးဝါးနေပါတယ်။
Velvet Crush by Jake Olson Studios on 500px
depth of field ပေါ်မှာ အပါရှာရဲ့လွမ်းမိုးမှုကတော့ကြီးမားတယ်ဆိုတာသိလောက်ပါပြီ။ အပါရှာကြီးလျှင် ဖိုကပ်ပြတ်နယ်နိမိတ်ကျယ်ဝန်းပြီး အပါရှာသေးလျှင် ဖိုကပ်ပြတ်နယ်နိမိတ်သေးငယ်ပါတယ်။
စာရေးသူ စောစောပိုင်းက ပန်းခြံထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံနှစ်ပုံကိုသုံးပြီး ထပ်ရှင်းပြပါမယ်။
ဘယ်ဖက်ကပုံကို အပါရှာ f/22 နဲ့ရိုက်ထားပြီး ဒုတိယပုံကို f/2.8 နဲ့ရိုက်ထားတာပါ။ ခြားနားမှုကတော့သိသာပါတယ်။ f/22 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာ ပန်းနဲ့ အဖူးနှစ်ခုလုံး ဖိုကပ်ပြတ်ပြီး အနောက်ကအရွက်တွေနဲ့ ခြံစည်းရိုးကို ကောင်းမွန်စွာ မြင်ရပါတယ်။
f/2.8 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံမှာတော့ ပန်းကဖိုကပ်ပြတ်ပါတယ်။ သို့သော် depth of field ကတော့အလွန်သေးငယ်သဖြင့် အနောက်ကအရာတွေလုံးဝမကွဲပြားတော့ပါ။ ကင်မရာမှအနည်းငယ်ပိုဝေးသော နေရာရှိပန်းဖူးသည်လည်း ဖိုကပ်ဝါးနေပါသည်။
ဒါတွေအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ နားလည်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကင်မရာကိုဆွဲပြီး စမ်းရိုက်ကြည့်ဖို့ပါ။ အနီးအဝေးအရာဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတစ်ရာကိုရှာပြီး အပါရှာအရွယ်အမျိုးမျိုးသုံးပြီး ပုံတွေအများကြီးရိုက်ကြည့်ပါ။ အပါရှာရဲ့အသုံးဝင်မှုကို နားလည်သဘောပေါက် သွားပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် တချို့သောဓာတ်ပုံအမျိုးအစားတွေမှာ သေးငယ်သောအပါရှာကိုသုံးရပါတယ်။ ရှုခင်းဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ အပါရှာနံပတ်ကြီးကြီးရှိတဲ့ အပါရှာသေးသေးကိုသုံးတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ e.g. f/16
ပေါ့ထရိတ်သာရိုက်ပါက လူသာလျှင်အဓိက subject အဖြစ်ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် လူကိုသာအဓိကဖိုကပ်ထားပြီးနောက်ခံကို လှပစွာဝေဝါးနေသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုရရှိဖို့အတွက် အပါရှာနံပတ်သေးသေးရှိတဲ့ အပါရှာကြီးကြီးကို ရွေးသင့်ပါတယ်။ e.g. f/2.8
macro photography ကိုလေ့လာလိုက်စားသူများလည်းအပါရှာအရွယ်ကြီးကြီးကိုသုံးပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၎င်းတို့ ဖိုကပ်ဖြတ်ထားတဲ့ subject ကိုသာလူများရဲ့အာရုံပေးမှုရရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အပါရှာအကြောင်း ဤတွင်နိဂုန်းချုပ်ပါတယ်။ exposure triangle ရဲ့ အိုင်ဆိုနှင့် ရှပ်တာစပီး တို့ကိုနောက်ရက်သတ္တပတ်များတွင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆက်လက်လာရောက်အားပေးဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းအတွက် ကင်မရာ setting များ
2 Comments on ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာသိကောင်းစရာ – အပါရှာ
kyawnaingoo July 11, 2016 at 12:42 pm
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာ္ကူးယူသြားပါတယ္။ျပီးေတာ့group ေလးတစ္ခုဖြင့္ျပီး မူရင္းအတိုင္းသိမ္းထားျပီး တျခားေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္းမွ်ေဝထားပါတယ္။ ယူျပီးမွခြင့္ေတာင္းမိတာေတာင္းပန္ပါတယ္။ခြင့္လႊတ္ပါ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
zeno July 11, 2016 at 4:33 pm
အခုလိုအသိေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ copy ကူးယူၿပီး group ေပၚတင္တာထက္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို Digital Photography Myanmar ရဲ႕ Facebook page ကို like လုပ္ေစၿပီး http://www.dpmyanmar.com သို႔လမ္းၫႊန္ျခင္းျဖင့္ကူညီႏိုင္ပါတယ္။